Ngabe Inkampani Yakho Yenkukhu S ** t Isakwamukela Ukwehluleka? | Martech Zone
Ngabe Inkampani Yakho Yenkukhu S ** t Isakwamukela Ukwehluleka?
NgoMgqibelo, Juni 19, 2010 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Namuhla ebusuku kube ubusuku obumangalisayo. Mina nabanye abangane sahamba sayobona U-Eric Davis yenza umbukiso wakhe womuntu oyedwa, I-Red Bastard, ku- U-Indy Fringe yaseshashalazini. Umbukiso uyamangalisa, uheha izethameli bese uqothula kancane kancane ilunga ngalinye lezithameli ngesikhathi.
Engxenyeni eyodwa yombukiso, amalungu ezilaleli abuzwa ukuthi ayini amaphupho abo… alandelwa yimibuzo ngalokho abakwenzayo. I-Red Bastard bese icindezela umuntu ukuthi athathe isinyathelo sokusuka kulokho abakwenzayo do bese wenza igxathu elibheke kubo baphuphe. Njengoba abanye bekwenza, izethameli ziyamemeza, "Bastard". Njengoba abanye bewina futhi begwema lesi sinyathelo, bakhonjwe yizethameli babizwe nge- “Chicken S ** t”. Umphumela awumangalisi neze. Wonke umuntu ezilalelini wesaba ukuba sekupheleni kokugxilwa okulandelayo kweRed Bastard.
Ngabe lokhu kuhlangene ngani nokuMaketha? Ngaphezu kokucabanga kwakho.
Lesi isithombe-skrini segama elithile elingukhiye, elijwayelekile, elinokuncintisana okukhulu ku- I-Google Insights:
Ngihlangane nenkampani ngesonto eledlule okuyiyona nkonzo yayo eyinhloko ethize igama elingukhiye. Le nkampani ibisebenzisa imali eshisiwe (ngaphezulu kwama- $ 50k emkhankasweni owodwa othize) emithonjeni yezindaba yendabuko selokhu yasungulwa. Izindleko zaleyo mikhankaso zilokhu zikhuphukile ngokuhamba kwesikhathi futhi imiphumela ibincipha. Manje babheke ukumaketha oku-inthanethi ukubona ukuthi bangakumisa yini ukopha.
Ngenkathi ngihleli egumbini lokuhlala, bekungekho ukwesaba nje egumbini lokungena engxabanweni eku-inthanethi, bekukhona ukungakholwa nokungathembani. Le nkampani ibingeyona nje eyokuphika, empeleni bekwamukela ukwehluleka. Labo ababesetafuleni bephokophela phambili (kufaka phakathi nami) babebhekwa njengama- “Bastards”. Yize inkampani ibona ngokugcwele ukuthi abakwenzayo akusebenzi, bayaqhubeka nokuphikisana ngokuhamba online njengenketho.
Kungikhumbuze ukuba semkhakheni wephephandaba. Ngibuke ngenkathi abanye babaholi abahlakaniphe kakhulu embonini yezokukhangisa bebuka i-eBay neCraigslist benyuka phezulu bese benwaya amakhanda abo bemangala ukuthi kungani imali engenayo ehlukanisiwe yehla.
Ngiziqonda ngokuphelele izinkampani ezisebenza ngokwesaba futhi zamukela ngokucophelela ubuchwepheshe obusha, kepha uma ngibheka ukuthambekela kwabathengi ukusetshenziswa kosesho nemithombo yezokuxhumana njenge izindlela eziyinhloko lokucwaninga ukuthenga kwabo okulandelayo… ungakungabaza kanjani okusobala? Anginankinga nezinkampani ezamukela ukwesaba - kepha ngiyashaqeka lapho izinkampani ziqhubeka nokwamukela ukwehluleka.
Uma silahlekelwa yithuba lokuqhubekisela phambili le nkampani, ngingahle ngilingeke ukuthi ngisukume ngibatshele ukuthi bangobani ngempela…. ”Inkukhu S ** t!” URed Bastard uzoziqhenya… noma cha.
Qaphela: Ngiyaxolisa uma ukhubekiswe yizinkanyezi ezisobala… konke kungokwenzuzo enhle. Angiphikisani nabezindaba bendabuko - kepha ukuqonda ukuthi izitayela ekuziphatheni oku-inthanethi zikuguqula kanjani ukwenziwa kwezinqumo zabathengi kubalulekile ekulungiseni izindleko zakho zemidiya. Kulokhu, kusobala ukuthi intshisekelo yabathengi ezixazululweni ezikwi-inthanethi inyuke kakhulu.
Tags: ukwehlulekaumphetho we-indyibastard ebomvu
I-RIP: Yonke imininingwane yakho ingaphansi kukaMat
Cha, i-imeyili ayifile
UJun 20, 2010 ngo-9: 05 AM
Leso sinyathelo sokuqala sihlala sinzima kakhulu. Kunzima ngokwedlulele ukusuka kulokho okwaziwayo. Iningi labantu liboshwe ngamaketanga ngokuqiniseka kwalo. Sethemba ukuthi inkampani ekhonjisiwe ithathe isinqumo sokuthatha leap. Indatshana enhle.